Na Dia Nandoro Tena Aza Ny Lehilahy Iray Tao Crimea Mba Hiarovana Ny Trano Fivarotana Kafe An’ny Vadiny, Narodan’ny Fanjakana Ihany Ilay Izy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Septambra 2016 7:41 GMT
Ny fandoroan-tena nataon'i Strekalin no loza fara tampony indrindra mikasika ny ady momba ny Khottabych, toerana iray fisotroana kafé an'i Mila Seliamieva, vadiny, niorina tao amorontsirak'i Primorsky, ao amin'ny Ranomasina Mainty. Media maro no nitatitra fa namono tena tamin'ny afo i Strekalin mba hanoherana ny ezak'ireo manampahefana ao an-toerana handrava ny Khottabych, izay efa nosorohana hatreto. Tany am-piandohana, nampitandrina ireo manampahefana ao an-toerana i Strakalin fa hamono tena izy raha toa ka afindra toerana ny fanànany ao an-tanàna.
Nanambara tamin'ny gazety Komsomolskaya Pravda i Seliamieva fa tamin'ny May no nanakatonan'ireo manampahefana eo an-toerana ny trano fisotroana kafe izay azy, ary io ezaka farany io no fanimbalony nataon'ny tanàna mba handravàna ny Khottabych. Toerana tsy azo nolalovana fotsiny tao Primorsky Park ny Khottabych nandritra ny 15 taona, hoy i Seliamieva: “Mandoa hetra ara-dalàna izahay eto an-tanàna ary manana taratasy mazava tsara mikasika ny trano, fahazoandalana hatramin'ny taona 2018.” Mustafa Seliamiev, havan'i Seliamieva, nilaza fa i Strekalin, “tsy vao indray mandeha fa isaky ny misy hirika azo hanaovana azy, dia niezaka foana nandresy lahatra ireo manampahefana amin'izao fotoana ireo… saingy tsy nisy vokany izany. Nandritra ny lohataona manontolo, niady tamin'ireo mpanao asa fanorenana ireo izahay, izay, araka ny didy navoakan'ny tanàna, niezaka nandrava ny trano fivarotany kafe.”
Andrei Rostenko, lehiben'ny fitantanana ny tanànan'i Yalta, niteny tany amin'ny volana May lasa, fa “fanorenana tsy ara-dalàna” ny Khottabych izay “nandika ireo fenitra rehetra tokony natao”. Ireo ‘leasers’, hoy izy, “tsy nanaraka ireo fenitra ara-pahasalamana sy ireo fitsipika mifehy ny areti-mifindra [na] ny fiarovana sy ny lalànan'ny asa” na “nandray fepetra sahaza ho fiarovana amin'ny afo.”
Toa lasibatry ny fanadiovana morontsiraka ataon'ireo manampahefana ny Khottabych. Araka ny voalazan’i Rostenko tamin'ny volana May “Tsy tsiambaratelo intsony ny hoe [tsy] tian'ireo tompontany sy ireo mpitsidika ao Yalta ny zava-nitranga tao amin'ny morontsirak'i Primorsky. Mila mampitsahatra ny korontana isika, izay efa nisy nandritra ny ampolo taonany maro. Raha tsy manao n'inona n'inona izahay, tsy hànana tanàna intsony, fa vohitra iray rakotra talantàlana fivarotana.”
Nidera ny hetsi-panoherana nataon'i Strekalin ny sasantsasany tao Krimea mba ho fitondrana fisarihan-tsaina amin'ny zavatra tafahoatra ataon'ny fanjakana amin'ilay saikinosy. Tahaka an'i Sergei Sardyko monina ao Yalta, nanoratra tamin'ny Facebook taorian'ny fahafatesan'i Strekalin:
Tahaka ny fanentanana efa an-dalana ao Mosko ireo fironana amin'ny fanadiovana ny morontsirak'i Yalta, mba hanalàna ireo “fandraharahàna tsy ara-dalàna” ao an-tanàna. Trano fivarotana sy tranokely fivarotana manodidina ny 100 no narodana tamin'ny alin'ny 8-9 Febroary 2016, tao anatin'ny andiana fandrodanana nantsoina hoe “Alin'ireo Lapelina Lavabe”. Nanoratra tamin'ny tambajotra sosialy Vkontakte ny Ben'ny Tanànan'i Mosko, Sergei Sobyanin, fa “efa nijoro ” hatramin'ny taona 1990 ireo fivarotana ireo niaraka tamin'ny tsikombakomba sy fanohanan'ireo manampahefana tao amin'ny governemanta ka nanjary “loza ho an'ireo Maoskovita”. Nanao andiana famotehana vaovao iray ny tanàna (ny fahatelo raha atambatra) ny volana aogositra lasa teo.
Tao amin'ireo tanàna roa Yalta sy Maosko, nanao antso mba hanarahana ireo fepetran'ny fanorenana trano sy ireo filàna takiana amin'ny resaka fahasalamana ireo tomponandraikitra monisipaly, ary koa ny fikatsahana ny tombontsoa iraisan'ireo mponina eo an-toerana, mba hanamarinana ny fanosihosen'izay ireo ny zon'ny tsirairay. Ny zo amin'ny fananantany ao Yalta sy Maosko, ary koa toerana hafa ao Rosia dia toa tsy midika inona loatra raha oharina amin'ireo teny midina ataon'ny tanàna, ny fanjakana, eny fa na dia ireo olona manokana aza. Efa nilaza i Seliamieva fa mikasa hitory ny mpiandraikitra ny tanàna izy, saingy eo anatrehan'ny “sehatra ambony, fomba toy ny fanaon'i Maosko,” Tolona hamaky tratra ny azy.
Aza manahy, na izany aza: nampanantena ireo manampahefana tao Yalta fa handray “ny maha-olona” ho anaty kajikajy, amin'ny manaraka, rehefa handrodana ireo “fotodrafitrasa tsy nahazoana alalana” ry zareo. Ny filoha lefitry ny fitantanana ny tanàna dia nanambara tao amin'ny fahitalavitra Crimea 24 hoe: “Mazava loatra, fa efa nahazo lesana avy amin'io izahay, ary haka fomba fanao voalanjalanja kokoa hamahàna ny olana tahaka izany amin'ny hoavy, ho fanehoana ireo karazana fihetsehampon'ny olona iray.”
Ny rarin-tsaina tsy voatsabo no antony voalohany mahatonga ny famonoan-tena. Azo sitranina ny rarin-tsaina ary azo sorohana ny famonoan-tena . Ho an'ireo olon amarefo mety hiditra amin'ny famonoana tena sy ireo olana hafa ara-pihetsehampo, afaka mahazo fanohanana avy amin'ireo laharana miafina ianareo. Tsidiho ny Befrienders.org mba hahitanao laharan'ny sampan-draharaha misahana ny fiarovana ny famonoan-tena ao amin'ny firenenao.